Uncategorized – Page 81 – Shabakadda Amiirnuur
Dowladda Mareykanka Oo Sheegatay Mas’uuliyadda Dadkii Shacabka Ahaa Ee Lagu Xasuuqay Duleedka Ceelbuur.
War qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka Ee Qaaradda Afrika ayuu ku sheegtay Mas’uuliyadda weerar dad shacab ah lagu xasuuqay oo shalay ka dhacay gobolka Galguduud Bartamaha dalka Soomaaliya. Taliska Mareykanka AFRICOM wuxuu sheegay in 5 dagaalyahan oo Al Shabaab ah ay ku dileen duqeyn xagga cirka ah […]
Kadib markii ciidamada gumeysiga Kenya iyo kuwa Itoobiya ku fashilmeen duullaanka ay ku qaadeen gobollada Jubbooyinka ayay dhinacyadaasi cadowga ah waxay sheegeen in ay qaab cusub u wajahayaan dagaalka ka dhanka ah muslimiinta. Taliska ciidamada AMISOM ayaa sheegay in ay bilaabayaan qorista maleeshiyo beeleedyo ay carra tuur uga dhigtaan weerarada […]
Itoobiya Oo Yeelatay Ra’iisul Wasaare Cusub oo Oromo Ah.
Kulan saacado badan qaatay kadib oo ay yeesheen xubnaha xisbiga talada haya ee dalka Itoobiya ayay isku raaceen qofka noqonaya Ra’iisul wasaaraha dowladda Itoobiya sanadaha soo socoda. Xisbigan oo ka kooban 1800 oo xubnood ayaa kulamo maalmo socoday kadib waxay shalay aqbaleen istiqaalada Ra’iisul wasaarihii hore ee Itoobiya Heyla Maryam […]
Idaacadda Radio Muqdisho oo aanan xaqiiqda looga baran islamarkaana ku hadasha Afka Farmaajo iyo kan Amisom, ayaa baahisay war ay ku sheegtay in rag mas’uuliyiin ay isaga bexeen Xarakada Al-Shabaab kuwaasoo ay ku kala tilmaantay waaliga Bay iyo Bakool iyo Waaliga Gedo. Ugu horreyn, waxay warkeeda ku bilowday sidan:- “Waraysi […]
War degdeg ah oo goor dhow kusoo dhacay war qabadka shabakadda Amiirnuur.com ayaa sheegaya in weerar ka dhacay nawaaxiga degmada Wanlaweyn lagu dilay mas’uuliyiin ka kala tirsan Hir-shabelle iyo Koofur galbeedka. Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qarax culus uu haleelay gaari ay saarnaayeen wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee K/galbeed iyo […]
Sawirro: Magaalada Jilib Oo Laga Furay Xarun Lagu Barto Farsamooyinka Muhiimka ah.
Wilaayada islaamiga Jubbooyinka ayaa xarigga ka jartay mu’asasad lagu magacaabo Al-xikma oo lagu baran doono farsamooyin muhiim ah, sida cunto karinta,tolista dharka iyo caafimaadka, Sidoo kale shaqooyinka mu’asasadda waxaa ka mid ahtarbiyaynta ilmaha yaryarka ah. Xafladdii furitaanka waxa ka hadlay salaadiinta iyo wax garadka Jilib iyo waaliga wilaayada Jubbooyinka Sh […]
Daawo Vedio: Cabdi Qybdiid oo Markii Ugu Horreysay Tilmaamay Ujeedadii Gurigiisa Loo Weeraray.
Hogaamiye kooxeed hore, gudoomiyaha gudiga dastuurka ee golaha aqalka sare, xildhibaan Cabdi Xassan Cawaale Qeybdiid ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadlay cidda weerartay gurigiisa iyo ujeedada loo weeraray. Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku sheegay in Imaaraadka iyo Nabad sugiddu si wada jir […]
Ajnabi Ah oo Lagu Dhex Dilay Xarunta Hey’adda “UNICEF” Ee Muqdisho.
Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa galabta lagu dilay nin ajanabi ah oo ka tirsanaa shaqaalaha hay’adda lagu magacaabo “UNICEF” kaas oo uu dilkiisu ka dhacay xarunya ay hay’addu ku leedahay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ninkan la toogtay ayaa wararku sheegayaan inuu ka mid ahaa shaqaalaha cuntada kariya […]
Askari Ka Tirsan DF oo Degmada Yaaqshiid Lagu Dilay.
Askari ka tirsan ciidamada DF ayaa lagu dilay isgoyska Fagax ee degmada Yaaqshiid isagoo ku jira hawl maalmeedkiisii caadiga ahaa, waxaana ay dad goob joogayaal ah sheegeen in rag hubeysan ay ku dhufteen dhowr xabadood. Markii uu dilku dhacay ayaa waxaa goobta isaga cararay dadkii shacabka ahaa oo ka cabsi […]